Izinguquko zosaziwayo: Abalingisi aba-5 abashintshe ngendlela engaphezu kokuqashelwa - Indlela yokuphila 2022
Izinguquko zosaziwayo: Abalingisi aba-5 abashintshe ngendlela engaphezu kokuqashelwa
Sean noMarlon Wayans
Kwesinye isikhathi kuba nzima ukubona umlingisi odumile kumlingiswa othile. Futhi konke sibonga izimonyo.
Ngenxa yendima enhle kakhulu, abalingisi balungele ukuya kude, ngisho noshintsho olukhulu ekubukekeni. Buka lezi zinguquko ezeqisayo ngenxa ye-cinema.
Ngenxa yendima ye-maniac kumdlalo othokozisayo waseSpain othi "The Machinist" (2004), uMkristu waba nethuba lokuziletha ngokuzithandela esimweni sokukhathala ngokweqile - walahlekelwa cishe ngamakhilogremu angu-30.
Kule filimu ethi "White Chicks" abafowethu uSean noMarlon Wayans ngosizo lwe-latex nokwenza izimonyo kwakudingeka babe ama-blondes anamehlo aluhlaza, lapho baphinde bazalwa khona nsuku zonke. Lokhu kuthathe cishe amahora angu-8.
U-Tom Cruise uphinde wazama ukwenza izinguquko ezinzima, ezathatha amahora amaningi endimeni lapho edlala umdidiyeli wefilimu onezinwele ezimfushane ethi Soldiers of Failure. Ukuze ibe indoda eyisidudla, indoda ebukekayo ngomzimba omncane kwakudingeka igqoke isudi engakhululekile nesindayo.
Umdlali we-actress umane uthanda ukuphindukuzalwa, futhi lapho lezi zinguquko zishintsha kakhulu, kuthakazelisa kakhulu kuye. Ngakho, ku-movie ethi "Monster" u-Charlize wadlala u-Eileen Wuornos, umbulali we-serial waseFlorida, futhi wazuza i-Oscar yakhe yokuqala kule ndima.
Wonke umuntu uyazi ukuthi uJohnny Depp umane nje uyingcweti yezinguquko, futhi uvame ukukwenza ngale kokuqashelwa. Ngokwesibonelo, ku-movie ethi "Alice in Wonderland" wadlala Mad Hatter, ngemuva makeup, izinwele nezingubo okuyinto okunzima ngempela ukubona Depp.
I-wardrobe efanelekile: indlela yokubeka ama-accents esithombeni ngendlela efanele
Indlela yokujezisa ingane ngendlela efanele: umbono wesazi sokusebenza kwengqondo uDmitry Karpachev
Ungazisebenzisa kanjani iziqephu zamehlo nezindebe ngendlela efanele ukuze uthole umphumela omkhulu
Isigaba sokunakekelwa kwesikhumba sobuso ezitolo zezimonyo nezitolo eziku-inthanethi sikhula njalo. Lesi sikhathi sizokutshela ukuthi kungani futhi kanjani ukusebenzisa izindebe zezindebe, izibazi zamehlo, futhi, empeleni, kungani zonke lezi zimali zidingeka
Indlela yokudaya izinwele zakho ekhaya ngendlela enhle njengase-salon
Indlela yokudaya izinwele zakho ukuze ungadingi ukulungisa konke kamuva? Okungcono - kusuka ku-master. Kepha manje konke sekubekwe yedwa, ngakho-ke kuzofanela ukwenze wedwa nangeseluleko sethu